Galitaanka Oracle Spatial ee BentleyMap - Geofumadas
Febraayo, 2016 cadastre, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Kuwa soo socda ayaa tusaale u ah hawlaha la samayn karo iyadoo la adeegsanayo Microstation BentleyMap si ay u maamulaan macluumaadka laga helo xogta OracleSpatial.
Ku rakib Macmiilka Oracle
Ma'aha lagama maarmaan in loo helo Oracle ku rakibay kombiyuutarka. Keliya macmiilka, kiiskan waxaan isticmaalayaa 11g R2. Si ka duwan markii la isticmaalay Juquraafi Juquraafi ah, muhiim maahan in la qeexo xarig xiriir la leh macmiilka, sababtoo ah halkaas waxaa si fiican u shaqeeyay iyada oo la isticmaalayo qalabka ODBC. Xaaladda BentleyMap, xarigga xiriirka waxaa lagu qeexay VBA si aan u galin, waxaa lagu keydiyaa faylka xml ama waxaa lagu galaa guddiga marka la sameynayo xiriirka.
Ku xir xogta
Faylka> khariidadda khariidada
Tani waxay abuureysaa tabo guddi dhinac ah, taas oo noo ogolaaneysa in aan isku xirno xogta ilo kala duwan. Xaaladda BentleyMap, halkan waxaad ka heli kartaa xiriirka Oracle, Adeegyada Adeegyada Wicda Adeega WFS iyo Adeegyada WFS.
Nasiib maaha in aysan jirin xiriirka PostGIS.
Markaad ku jirto faylka Xiriirinta, midig guji oo dooro New Oracle Connection ...
Tani waxay muujinaysaa guddi, meesha aan ku galeyno user, password iyo cinwaanka adeegga.
Haddii ay jirto marin dhinaca dekedda, taas oo ah inta badan 1521, iyo sidoo kale martigeliyaha iyo adeegga fog ee meesha lagu daabaco.
Qalabka xiriirka waxaa lagu keydin karaa faylka XML ee kordhinta orax, sqlx ama wfsx si aad u soo wacdo adoo aanad geleynin beeraha.
La tasho oo akhri macluumaadka
Marka xiriirka la abuuro, lakabyada laga heli karo mashruuca waxaa lagu soo bandhigaa, kaas oo lagu arki karo si haboon qaabka, ama qaybta sifooyinka lagu qeexay Maamulaha Geospatial.
Si aad ula tashato xogta, astaanta qaabka muraayadaha loo isticmaalo, tani waxay u oggolaaneysaa in ay soo bandhigto macluumaadka qaabka qaabka ama qaabka xml.
Boodka midigta ee jiirka ayaa la mid ah hawlaha isku midka ah ee baraha qalabka jimicsiga lagu muujiyay:
Querry waxaa loo isticmaalaa in la sameeyo su'aalaha xogta, midba midka ka muuqda (View) ama laga soo bilaabo su'aal gaar ah, ama dhammaan xogta jira ee ku jira shaxda.
Boostada waxaa loo isticmaalaa in lagu keydiyo isbeddellada lagu sameeyay joomatari.
Xakameyn / furfurid si ay suurtogal u noqoto suurto galka isbedelka.
Tirtiraha Xaaladaha Cached ayaa tirtiraya xogta aragtida
Haddii aad rabto inaad sameyso su'aal gaar ah, waxaad ku dari kartaa berrinka Meeshii la cayimay, sida ku cad macluumaadka ku jira shayga. Xaaladdan oo kale, waxaan kaliya rabaa shuruudaha cadawga, oo ku jira dawlad firfircoon oo ka tirsan waaxda 0006 ee Waaxda 08 iyo 01. Su'aalku wuxuu noqonayaa:
DIIDAY = 0 IYO CODDEPARTAMENTO = 08 IYO CODMUNICIPIO = 01 IYO QIIMEYN = 0006
Waxaa muhiim ah in la fahmo in BentleyMap ay si toos ah u habayso, sidaa daraadeed suurtagalnimada samaynta musiibooyinka ayaa been ka ah la'aanta xakamaynta amniga. Waa lagama-maarmaan in si cad loo ogaado doorarka isticmaalayaasha, iyadoo la tixraacayo xakamaynta xakamaynta iyo ka-soo-kabashada macluumaadka laga tirtiro qaladaadka. Guud ahaan dadku waa ay xun yihiin waxayna isku kalsoon yihiin in ay xiranyihiin furaha.
Inta kale, waa wax la yaab leh, iyadoo tixgelinaysa in aad leedahay dhamaan awoodaha barnaamijka CAD. Tabobarku wuxuu yiraahdaa waa inaad leedahay samee isticmaalka VBA si loo helo maamul wanaagsan oo ah qalabka iyo maareynta macaamilka.
Post Previous«Previous Miisaanka Twilight The
Post Next Isbuucyada 2 ee wada-shaqeynta khadka map Latin AmericaNext »